Health & Medical Equipments
Items 1 to 16 of 310 total
Alpinion E-CUBE7Ultrasound Machine
The E-Cube7by Alpinion is positioned asamid range unit with pricing lower than normal foramid range system. Alpinion’s strength is in its high image quality, excellent high-spec proprietary probes, and long warranty. Its powerful 3D engines provide solid information on the health of pregnant women and their fetuses as well as gynecologycal diseases. The E-Cube7is small and light compared to other mid-range console systems. အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုတို့ကြောင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေး သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖော်ပြနိုင်ခြင်းနှင့် တာရှည်အသုံးခံတို့ခြင်းတို့ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Inno Portable Ultrasound System
The Alpinion E-CUBE Inno portable ultrasound isapremium, portable ultrasound system capable of producing extremely high resolution images for all modalities. See clear and defined borders with incredible detail on any tissue. There is no compromise when choosing the Alpinion E-CUBE Inno portable ultrasound, this system has been designed with durability, reliability, and ease of use in mind. The exceptional image quality allows for quick, accurate diagnosis while workflow on this system is rapid and intuitive. အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ကျယ်ဝန်းသောLED Monitor ၊ALPINION ၏ မြင့်မားသောနည်းပညာ၊ထူးခြားဆန်းပြားသော Design အသွင်အပြင်နှင့် Scan ဖတ်စစ်ဆေးမှုများအကောင်းဆုံးအခြေအနေဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါသည်။
ရေသန့် စင်သည့် အဆင့် ၅ ဆင့်ပါသည့် Ro System ရေသန့် စက်
Asia Face Trading ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သည့် Ro System ရေသန့် စက် ကို ဖြန့် ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိ်ပါသည်။ ၁၀၀ ဂါလံရေသန့် စက်၏ စိတ်ချရမှု့ နှင့် အ ဆင်ပြေမှု့ ကြောင့် အိမ်တိုင်းတပ်ဆင် အသုံးပြုသင့်သော စက်အမျိုး အစား ဖြစ်ပါသည်။ Ro System ရေသန့် စက်တွင် Filter5ခုဖြင့် ဖွဲ့ စည်း ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ( PP Sediment Filter )5micron Filter ရေတွင်ပါဝင်သည့်5micron Filter ရေတွင်ပါဝင်သည့်5mincron အထက်ရှိ အမှိုက် များ နှင့် အနည်းများကို ဖယ်ရှား ပေးပါသည်။ ( Granular Activated Carbon Filter ) ကလိုရင်း အနံ့ ၊ ရွှံ့ စေး စသော အနံ့ ဆိုးများ နှင့် အရောင်များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ( Block Activated Carbon Filter ) ကလိုရင်း အနံ့၊ ရွှံ့ စေးစသော အနံ့ ဆိုးများနှင့် အရောင်များကို ထပ်မံ ဖယ် ရှားသန့် စင်ပေးသည်။ (Ro membrane ) Ro system သည် အာကာသစခန်းရှိ အသုံးပြု ပြီး သော စွန့် ပစ်ရေများကို သောက်သုံးနိုင်သည့် ရေသန့် အဖြစ် ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသောနည်း စနစ် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း၏ စွမ်းဆောင်မှု့ မှာ 0.0001 micron ( ၁ စင်တီမီတာ၏ သန်းတစ်ရာပုံ တစ်ပုံခန့်) အထက်ရှိသော ဓါတ်သတ္တု ပစ္စည်းများ ၊ ဘတ်တီးရီးယားပိုးများ ၊ ဗိုက်ရပ်စ် ပိုး မွှားများ ကို ဖယ်ရှား သန့် စင်ပေးနိုင်သဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ရေသန့် စင်စနစ် ဖြစ်ပါသည်။ ( Post Inline Carbon Filter ) ရေတွင်ပါဝင်သော အောက်ဆီဂျင်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း ၊ ရေ၏ အနံ့ နှင့် အရသာကို ပို၍ ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပေးပါသည်။ ဒါ့ပြင် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် Ro System ပါဝင်သည့် ရေ သန့် စက်ကို 1 နှစ်အာမခံဖြင့် ရောင်းချပေးသည့် အပြင် တစ်လတစ်ကြိမ် ပုံမှန် အခမဲ့ လာရောက် စစ်ဆေး ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဝယ်ယူ အသုံးပြု လိုပါက Asia Face Trading ကုမ္ပ ဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Dedicated mobile cone-beam CT
-Dedicated mobile cone-beam CT -Compact / mobility -Low dose -ENT products (structures of the ears and nose/sinuses) -Orthopedics, emergency, military and veterinary -Quantitative bone analysis -Easiest device to set up: plug in to the nearest wall outlet. ယုံကြည်စိတ်ချအရဆုံး ၊အခိုင်ခန့်ဆုံး ၊အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးနှင့်နည်းပညာအမြင့်မားဆုံးသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Equipments များကို Branded စုံလင်စွာဖြင့် ကျွန်တော်များ ACS Myanmar Co.,Ltd တွင် ပစ္စည်းမှန် ဈေးနှုန်းမှန်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။ပိုမိုသိရှိလိုပါကလည်း ACS Myanmar Co.,Ltd ကို တိုက်ရိုက်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Spengler Automatic Blood Pressure Monitor
Compact and easy to use, this wrist style device providesaconvenient way to monitor one&#039;s blood pressure. Totally automated, the ECO-PRESSURE provides precise and quick readings. For better health and wellness, this unit can hold data of up to 90 memories. This set comes withastandard size cuff for use on most adults,asimple carry case and batteries for operation. LCD မျက်နှာပြင်ကြီးမားကျယ်ဝန်းပြီး ခရီးဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Low Battery Indication ပါရှိပြီး Date &amp; Time ပါဝင်ပါသည်။အရည်အသွေးအကောင်းမွန်ဆုံးနှင့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ကြာရှည်အသုံးခံခြင်း၊သက်တောင့်သက်သာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် မိမိဘဝကျန်းမာရေးအဖော်မွန်အဖြစ် Automatic blood pressure monitor ကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
တရုတ် ရေစက်ခေါင်း မကြိုက်သူများအတွက် ထိုင်ဝမ် ရေစက်ခေါင်းလေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါမည်။ တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူပါတယ်။ ရေဝါတွေကို ရေဖြူဖြစ်စေပါတယ်။ ဈေးနှုန်း - 17000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Drive DeVilbiss Healthcare offersacomplete line of CPAP, AutoAdjust® and Bilevel devices as well asacomplementary portfolio of effective interfaces. All designed with patients and providers in mind, offering unsurpassed quality, advanced comfort features and industry leading value.
Built uponalegacy of reliable, field-proven concentrator models, the DeVilbiss5Liter Oxygen Concentrator was designed with enhanced quality, durability and simplicity in mind.Patented DeVilbiss Turn-Down Technology minimizes wear on internal components, reduces power consumption by 15% or more and extends the life of the concentrator.Exclusive DeVilbiss OSD (Oxygen Sensing Device), standard on every unit, ensures patient safety and reliability for longer service intervals.Readily accessible patient controls, protected cannula fitting and recessed humidifier nook to prevent damage.Alarms Audible and visual high/low pressure, low flow, low oxygen, power fail, Oxygen Sensing Device.
LEA Symbols Flash Cards
LEA Symbols Single Presentation Flash Cards. Includes response key, training cards, and instructions. 30 cards per set 10 cm x 12.7 cm to 12.7 cm 12.7 cm
Shake N Take 3
Shake N Take လေးနဲ. ယခုဆိုရင် အသီးတွေ အားလုံးကို ဖျော်ရည်အဖြစ်သို. ပြောင်းလဲ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်သီးတွေကို အမြဲစားသုံးပါက၊ သောက်သုံးပါက ကျန်းမာရေးနဲ. ညီညွတ်စေတယ်လေ။ Rocket မှာ ရောင်းချနေတဲ့ Shake N Take လေးဟာဆိုရင်ဖြင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ဖြုတ်တပ်ရ အဆင်ပြေမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခလုတ် တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ. သစ်သီးတွေ အားလုံးကို ဖျော်ရည် အဖြင့်သို. ပြောင်းလဲ သောက်သုံးနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲတွင် ရေဘူး နှစ်ဘူး ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ ပိုက်ထည့်သောက်ရန် အပေါက်လေးလည်း ပြုလုပ် ပေးထားပါတယ်။ များပြားလှတဲ အလုပ်တွေကြားမှာ Shake N Take ဖြင့် အသီးဖျော်ရည် တစ်ခွက်ကို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်ကာ သောက်သုံးလိုက်ပါတော့ တစ်နေ.တာလုံး လန်းဆန်းစေရန် မနက်ပိုင်း သစ်သီး ဖျော်ရည် ပြုလုပ်မလား Gym မသွားခင် ဖျော်ရည်တစ်ခွက်နဲ. အားအင်တွေ ဖြည့်သွားမလား ဆိုရင်ဖြင့် ShakeNTake3လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/videos/878095022328817/ ဈေးနှုန်း - 25000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
CCU Electric Bed
Steel bed frame with scratch and chip resistant baked epoxy powder coating PE Head &amp; Foot boards with locking mechanism for easy attachment, detachment and can be cleaned easily.Split fold down PE safety side rails with one-hand operation Backrest with X-Ray radio Translucent base complete with X-Ray cassete tray Perforated Mattress support base.
လွန်စွာ မေ့မြန်သူများအတွက် ဆေးသောက်ဖို. အဆင်ပြေစေရန် ဆေးထည့် ရေဘူးလေးကို Rocket မှ မှာယူလိုက်ပါ။ https://www.facebook.com/RocketOnlineShopping/videos/878452502293069/ တစ်ပါတ်စာ သောက်ရန် ဆေးများကို ရေဘူးဘေး ထည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဘူးအဖုံးကလည်း ဆေးသောက်ဖို. အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပေးဖို. လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ. ဆေးထည့်ရေဘူးလေးကို အခုပင် မှာယူလိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း - 12000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
<p>BaganMart.com is biggest B2B eCommerce platform for health and medical equipments in Myanmar.</p>
What is BaganMart?
copyright © 2021 www.baganmart.com. All right reserved.
Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis amet...
Color black red blue purple green white